Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Kalvin Phillips Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Kalvin Phillips Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezigbo Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, arsgbọ ala, Net Worth, Web, na Personal Life.
Dị mfe, anyị na-ewetara gị ngọngọ zuru oke nke Kalvin Phillips 'Life Story, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Lee nchịkọta nkenke nke Bio ya.
Ee, ọtụtụ ndị hụrụ football n'anya kwenyere na ụdị egwuregwu ahụ Andrea Pirlo, nke mere ya jiri nweta aha; Yorkshire Pirlo.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere Kalvin Phillips Biography, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N'egbughị oge, ka anyị bido.
Kalvin Phillips Childhood Akụkọ:
Malite na, Kalvin Mark Phillips a mụrụ na 5th ụbọchị Disemba 1995 na nne ya Irish, Lindsay, na nna Jamaica na Leeds, England.
Onye bọọlụ bọọlụ mụrụ mmadụ atọ mana nwanne ya nwanyị nwụrụ mgbe ha ka dị obere.
Ọzọkwa, Phillips nwere ụmụnne nwoke abụọ ndị ọzọ anyị tọrọ bụ ndị anyị ga-ekwurịtakwu banyere ha na akụkụ ikpeazụ nke akụkọ ndụ ya. Lee, ụmụ ejima atọ ndị nne na nna Kalvin Phillips mụrụ - ị nwere ike iji anya nke uche hụ ya?
'Phillips bụ nwata banyere nne ya, onye lekọtara ya na ụmụnne ya anya dịka nne nanị ya na-azụ ụmụ.
N'oge ahụ, mama ya gbalịsiri ike igbo mkpa, na-enye ụmụ ya ihe kachasị mma.
Maka ebumnuche amaghị, Phillips bụ nwata enweghị nna ya. Ka o sina dị, nne ya weere ibu ọrụ nke ịbụ nna ma rụọ ọrụ nke ọma.
N'iche echiche banyere mmalite ndụ ya, Midfielder na-etokarị mama ya maka obi ike ya n'ịzụlite ha otu aka.
Ezigbo Ezinaụlọ Kalvin Phillips:
Otu ihe na-adọrọ mmasị nke meworo ka e si zụlite Phillips bụ ịhụnanya. Nwatakịrị ahụ na-echeta iso nne ya na nne na nna ya ochie nọrọ ọtụtụ oge mara mma.
Foto dị n'okpuru ebe a bụ oge atụghachi azụ nke oge na-agaghị agbanwe agbanwe nke obi ụtọ Phillips nọrọ na nne ya.
See hụrụ, afọ ojuju nke jupụtara ebe obibi ya mere ka ọ ghara isiri Phillips ike ịtụle ezinụlọ ya dị ka ezinụlọ bara ọgaranya. Otú ọ dị, nwatakịrị ahụ na-esite na klas nke ezinụlọ.
Ezigbo ezinụlọ nke Kalvin Phillips:
A mụrụ nna nna nke igbe igbe igbe gafere karịa otu agbụrụ. N'ihi ya, ezinụlọ Kalvin Phillips nwere ma agbụrụ Irish na Jamaica.
O gosiputaghi njirimara nke nna ya na ezinụlọ ya (Jamaica) n'ihi na ya na nna ya anoghi.
Kalvin Phillips Football Akụkọ:
Dịka nwatakịrị, Phillips na-etinye uche ya mgbe niile n'ịgba bọl. Ọ hụrụ egwuregwu ahụ nke ọma nke na ihe ọ ga-eche bụ ịpụ na nwanne ya nwoke ga-egwu.
N'oge ahụ, nna nna ya, (dị n'okpuru ebe a) na-ahụkarị na ọ na-elekọta ndị na-eto eto na-egwu egwuregwu ka ha na ụmụaka ndị ọzọ na-abanye n'egwuregwu football.
Ka nwatakịrị nwoke Bekee ahụ na-etolite, otú ahụkwa ka nrụgide nke ịhọrọ ụzọ ọrụ ziri ezi si dị na ya.
N'otu oge, onye nkụzi Phillips gwara ya ka ọ kwụsị ịgba bọọlụ ma lekwasị anya na agụmakwụkwọ ya.
Otú ọ dị, ịhụnanya o nwere maka bọl mere ka ọ ghara ikwe omume ikwenye na ndụmọdụ onye nkụzi ya. Iji mee ka akụkọ ahụ dị mkpirikpi, ọ kwara ụta maka mkpebi ya.
Ndụ Kalvin Phillips na Ndụ Ndụ na Nlekọta Ọrụ:
Mgbe ọ hụrụ na Phillips gosipụtara mmasị karịa football karịa ihe ọ bụla ọzọ, mama ya debara aha ya na klọb dị na mpaghara (Wortley) na 2003.
N'oge ahụ, nwatakịrị ahụ dị nanị afọ asatọ mgbe ọ sonyeere Wortley, ọ ga-ejikwa ụlọ ọrụ ahụ zụlite talent ya ruo afọ asaa ọzọ.
Afọ 2010 nwere nnukwu ngọzi nye nwa okorobịa Phillips, onye mechara sonye Leeds United's Academy mgbe ọ dị obere na 14.
Ikwenyeghi na ekwuputara Phillips na ulo akwukwo Leeds site na obi ojoo. N'okpuru ebe a ka o si achịkọta usoro ọmụmụ nke ọrụ Leeds ya.
“Agara m ile egwu na-egwu egwu n'ụlọ egwuregwu ha. KA O SIRI, HA EBUGH EN OUB PLRAY NDAY NA-EKWU EGO, M KPỌRỌ HA.
M nwetara site na Sunny SWEENEY wee gaa na-eduzi ụmụ okorobịa. Ọ B ANDR AND MA LEE M MGBE MGBE MGBE M B MER G M N’ ALỌ IRI NA ISII N’IME LEEDS. Ha nile si n'ebe ahụ pụọ. ”
Kalvin Phillips Biography- Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Afọ anọ nke ọzụzụ na ịrụsi ọrụ ike na Leed's Academy hụrụ Phillips ka ọ na-akọwapụta ọfụma bọọlụ amụrụ ya.
Na 2014, Phillips arụ ọrụla ọkwa ya nke ọkwa ama ama ruo mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta mbụ ya na klọb ahụ.
Afọ mbụ nke ọrụ ọkachamara Phillips ji ọtụtụ onyinye a na-atụghị anya ya bịa. Nke mbu, emere Phillips onye isi ndi Leeds 'U-18 na ndi otu mmepe.
Nke abuo, a hoputara ya ka o sonyere ndi otu ndi otu ya dika ha gara ihu Sunderland na 2015 FA Cup nke ato. Otú ọ dị, ọ bịara dị ka onye na-ejighi ya dochie ya na egwuregwu ahụ.
Kalvin Phillips Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Dị nnọọ ka United Brandon Williams, Phillips gosipụtara ọmarịcha egwuregwu bọọlụ mgbe ọ na-arụ ọrụ dị ka onye isi ndị otu egwuregwu ya.
N'April 2015, ọnụ ụzọ ama ama kpaliri Phillips ka ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na mbụ maka Leeds United na mmeri 4-3 megide Wolverhampton Wanderers.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere Bio a, Phillips enyerela Leeds United aka ịrapara na 2019-20 EFL Championship n'okpuru Marcelo Bielsa.
N'ihi ya, a kwalitere ụlọ ọrụ ya na 2020-21 English Premier League maka oge mbụ n'ime afọ iri na isii.
You ma na Kalvin Phillips jụrụ nkwekọrịta nkwekọrịta ruru £ 27 nde na windo mbufe 2019?
Ọbụna o gosipụtara mmetụta iguzosi ike n'ihe nye Leeds United ka ọ na-abanye akara aka na afọ ise ọhụụ ya na otu ahụ.
Na mgbakwunye, Gareth Southgate gọziri ya na ịkpọ oku England na 25th nke August 2020.
N'ikpe ikpe site n'ụzọ ọ na-aga, Kalvin, obi abụọ adịghị ya nwere ikike ịbụ onye a họọrọ n'etiti isi iri kacha mma Leeds United Player na oge niile. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Kalvin Phillips Nwunye na Nwa:
Ọtụtụ ụmụ nwanyị ejirila ịhụnanya dị ukwuu kpoo Ndụ Akụkọ ya. E wezụga nne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị, Phillips nwekwara ezigbo enyi nwanyị ọ hụrụ n'anya nke ukwuu.
N'ọtụtụ oge, onye England ahụ na-eme ihe nkiri na Instagram iji kesaa foto ya na enyi nwanyị nwanyị na-eme ihe nkiri, Ashleigh Behan.
Ọ bụ ezie na ụmụ nnụnụ ahụ alụbeghị di na nwunye, ha ebiela afọ ole na ole ugbu a.
Mgbe nkwalite nke Leeds United na Premier League, a nụrụ kepu kepu na Phillips na Ashleigh Behan nwere ike ịlụ n'oge na-adịghị anya. N'ikwu eziokwu, anyị niile na-agbanye mkpọrọgwụ maka akụkọ ịhụnanya ha wee na-eto eto n'alụmdi na nwunye.
Kalvin Phillips Ndụ Nke Onwe:
Anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ na Midfielder na-egosi na ọ na-enwe obi ụtọ ma nwee obi ụtọ.
Agbanyeghị, onye ọkpụkpọ Leeds mgbe ụfọdụ na - ewepụ onwe ya pụọ ​​na ụwa a na - eme mkpọtụ iji tụgharịa uche banyere rụzuru na ndagide ya na ndụ.
Gịnị nwere ike ịbụ ya n’obi ka ọ na-elegharị anya nke ọma n’ime mmiri dị na foto dị n’okpuru?
Ọzọkwa, a na-adọta onye ọkpụkpọ bọọlụ bekee ka ya na obere ụmụaka nọrọ oge.
Dị ka kpakpando Brazil, Suchdị Alex, Phillips na-egosikwa mmasị ya n'inyere ụmụaka na-arịa ọrịa aka inweta ahụike zuru oke.
Ka a sịkwa ihe mere o ji mee ọtụtụ nleta n'ụlọ ọgwụ iji mee ka obi dị ọtụtụ ụmụaka na-alụ ọgụ maka ndụ ha ọgụ.
Ndụ Kalvin Phillips:
Ibi na ụwa ebe ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ (dịka Eddie Nketiah na Mason Holgate) na-egosiputa akụ ha rụsiri ọrụ ike, Phillips kpebiri ime ihe ọzọ.
Onye ọkpụkpọ Leeds anaghị agbacha ụgbọ ala ya na ụlọ ndị dara oké ọnụ n'ihi na ọ chọghị nlebara anya nke ukwuu site na mgbasa ozi.
N'agbanyeghị nke ahụ, ahụrụ Phillips ka ọ na-anya Mercedes Benz G-Wagon gaa Leeds United ọzụzụ na June 2020.
Kalvin Phillips Net thtọ:
You ma na Yorkshire Pirlo (aha otutu ya) bu otu n’ime ndi kacha enweta ego nke Leeds United?
N'oge a na-ede akụkọ ndụ a, Phillips na-akwụ ụgwọ ego kwa afọ nke £ 1.5. Moreso, ego ọ ga - enweta ga - abawanye ma ọ bụrụ na klọb ya debe ihe ịga nke ọma na Premier League.
Ndụ Kalvin Phillips Ndụ Ezinụlọ:
Edide emenịm m̀m or inịmke, mbonufọk esie ẹdi akakan enọ oro enye akpamade ndidu. Eziokwu bụ, ndị Leeds ọkpụkpọ ji onye ọ bụla mejupụtara ụlọ ya akpọrọ ihe.
Ezinụlọ Phillips bụ ebe obi ya dị. N'egbughị oge, ka anyị kọọrọ gị gbasara ezinụlọ magburu onwe ya.
Banyere Kalvin Phillips Nna:
Anyị enweghị ike ịgbagha eziokwu ahụ bụ na ọrụ nna bụ ịbụ onye na-egbo mkpa ezinụlọ. N’ụzọ dị mwute, ụfọdụ ezin’ụlọ ejighị ihe ùgwù dị otu a gọzie, ebe ọ bụ na nna ha nwere ike nwute ha ma ha buru nwata ma ọ bụ bụrụ ndị ezinụlọ adịghị ike.
N’otu aka ahụ, e wuru ụlọ Kalvin Phillips na mbọ nke nne ya na ndị nne na nna ya. Papa ya Jamaica abughi mgbe obula ihe di n'ime ndu ya site na mbu.
Agbanyeghị, Phillips Life Story bụ ezigbo ihe akaebe nye ọtụtụ ezinụlọ na-enweghị nna na ha nwere ike nweta nnukwu ihe ịga nke ọma ọbụlagodi adịghị ike ha.
Banyere Kalvin Phillips nne:
Ruo oge, àgwà kachasị asọpụrụ na ndụ ya abụghị mama ya, Lindsay.
N'ọtụtụ oge, ndị Leeds United player ejiriwo ohere dị iche iche nwee ekele maka nne ya maka iji aka ya zụlite ya na ụmụnne ya.
Lee ihe o dere maka nne ya na peeji Instagram ya;
“Ahụtụbeghị nwanyị na-arụsi ọrụ ike otú ahụ iji nanị ya lekọta ụmụ ya! Gaghị achọ nna mgbe ị nwetara nne na-arụ ọrụ abụọ a! ”
N'ezie, ọ bụghị naanị mama Phillips bụ nwanyị rụrụ nnukwu ọrụ nke ịzụlite ụmụ ha naanị. N'ihi ya, anyị na-agwa ndị nne niile na-azụ ụmụ nọ n'ebe ahụ nnukwu mkpu.
Nọgidesie ike n'ihi na ị ga-ahụrịrị ìhè na njedebe nke ọwara ahụ, dịka nne Kalvin Phillips.
Banyere ụmụnne Kalvin Phillips:
Ndụ ga - abụ ihe na - atọ ụtọ ma nwee afọ ojuju mgbe ị nwere ụmụnne dabara adaba. Dịka anyị kwuburu, a mụrụ Phillips dị ka onye atọ (ya na ụmụnne nwanyị abụọ).
Agbanyeghị, otu nwanne ya nwanyị nwụrụ (Lacreasha Phillips) n'aka ọnwụ mgbe ọ dị obere.
N'ihi ya, Phillips nwere nwanne nwanyị ejima, yana nwanne nwoke nke tọrọ (Terrell) na nwanne nwanyị nwanyị. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na Phillips na nwanne ya nwoke, Terrell, gbara bọọlụ ọtụtụ awa mgbe ahụ n'oge ha bụ nwata. Mgbe ọ na-akọ ihe ọ na-echeta, Phillips kwuru;
“Echetara m mgbe m chịịrị uwe nwanne m nwoke nke Leeds. Anyị na-egwu bọl n'èzí mgbe ọ bụla anyị nwere ohere, site na 10 n'ụtụtụ ruo elekere isii nke abalị mgbe mama m tiri mkpu maka tii. ”
Banyere ndị Kalvin Phillips:
E wezụga nne ya, nna nna Phillips na nne nne (nke dị n'okpuru ebe a) arụwokwa oke ọrụ na nzụlite ya.
N'ezie, nna nna Phillips, Jimmy, bụ onye na-akwado ya nke ukwuu tupu ya emeere onwe ya aha na football.
N'ụzọ dị mwute, Jimmy adịghị ebi ndụ na-eme egwuregwu nke nwa nwa ya.
Obere ihe m na-echefu, nne nne Phillips abụrụla isi iyi nke agbamume nye ya na nne ya ka ha na-agba mbọ inweta ndụ ka mma.
Kalvin Phillips Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akụkọ ndụ ya, lee ihe ole na ole ga - enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya.
Kwa Afọ £ 1,562,400
kwa ọnwa £ 130,200
Kwa Izu £ 30,000
Kwa .bọchị £ 4,286
Kwa elekere £ 179
Kwa Nkeji £ 2.98
Kwa nke abụọ £ 0.05
Anyị etinyela nyocha nke ọma na ụgwọ ọnwa Kalvin Phillips ka elekere na-akụ. Chọpụta n’onwe gị ego onye bekee ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Kalvin Phillips enwetawo Leeds kemgbe ị malitere ilele Bio ya anya.
Eziokwu nke 2: Okwu Kalvin Phillips:
The Leeds United ọkpụkpọ hụrụ ụwa nke inking n'anya. Dị ka Suchdị Alex, Phillips tinyere aka ole na ole na aka aka ekpe ya ka ọ na-etinye obere aka na aka nri ya.
Ọ bụ ezie na ọ ka ga-ekpughe ihe egbugbu ya pụtara, ọtụtụ ndị egwu ewerela ọmarịcha nka.
Eziokwu nke 3: Anụmanụ Kalvin Phillips:
Ọ dị ka ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ bekee nwere ezigbo mmasị na nkịta. N'otu aka ahụ, Phillips nwere obere nkịta ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Hụ otu o si jiri nkịta nkịta ya mara mma nọrọ ọdụ.
Eziokwu nke 4: Okpukpe Kalvin Phillips:
Kalvin Phillips bụ Onye Kraịst nke ji okwukwe ya egwu egwu. Site n’oge ruo n’oge, anyị niile ahụla ka ya na enyi ya nwanyị na ezinaụlọ ya na-eme mmemme Ekeresimesi dịka akara nke okwukwe ya na Jizọs Kraịst
Na mmụọ nke ịgba Krismas, Phillips wepụtara oge ka ya na ndị enyi ya nọkọọ n'oge oyi Wonderland. Nwere ike ịhụ ya na foto dị n'okpuru?
Eziokwu nke 5: Rating FIFA:
N'agbanyeghị na Phillips etinyego oge ka ukwuu n'ime ọrụ ya na EFL, Fifa lere ya anya dị ka onye egwu egwu.
N'ezie, Phillips nwere ikike nke 82, nke pụtara na ọ ka nwere ọtụtụ ịgba bọl na uwe aka ya. Lee anya na stats ya n'okpuru wee kpebie n'onwe gị etu ọ ga - esi rụọ na egwu ahụ.
Aha n'uju: Kalvin Mark Phillips
Aha Nick: Yorkshire Pirlo
Ụbọchị ọmụmụ: 5th December 1995
Ebe amụrụ onye: Leeds, England
Ụmụnne: ụmụnne nwanyị abụọ na otu nwanne nwoke
Enyi / nwunye: Ashleigh Behan
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 1.5 nde
Ahịa ahịa: £ 10.9 nde
elu: 1.78m (na mita) na 5 ′ 10 ″ (na ụkwụ)
Akụkọ Kalvin Phillips Life gosipụtara anyị enweghị mgbagha ọ bụla na ihe mgbochi nke nkụda mmụọ ga-eche anyị ihu mgbe niile n'ụzọ ọrụ anyị.
Agbanyeghị, anyị kwesịrị ijide n'aka banyere nkwenkwe anyị na ndị ọzọ iji merie nsogbu ndị ahụ. O doro anya na ọ ga-eso ná ndị a Oge Leeds United kachasị oge XI.
Ọzọkwa, n'agbanyeghị agbanyeghị njem anyị na-enwe ịga nke ọma, ka anyị cheta na anyị nwere otu onye ga-akwado anyị mgbe niile.
Ma ọ bụ nne na nna anyị, ụmụnne anyị, ndị enyi anyị, ma ọ bụ ndị ikwu anyị; a ga-enwerịrị onye ga na-elezi anya anyị. Kalvin Phillips mum mere nke ahụ mgbe nna ya anọghị na ndụ ya.
Daalụ maka ịgụAnyị Kalvin Phillips Life Story na Biography. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na isiokwu anyị.
Ma ọ bụghị, kọọrọ anyị ihe ị chere maka njem njem bọọlụ Kalvin Phillips.
Ebee ka nna ya ma obu ihe o na eme, gwa nne ya na onwe ya ume ka ha nwee ike iguzo nke oge. O kwesiri iga n'ihu na-ekwere na onwe ya na ndu ya ka nwere ike iru ihe
Zaa Adeyemi olaide surajudeen
E jidere nna ya ọtụtụ ugboro ka ọ hụghị ya dịka nwata